Itafura yeVV yakafuridzirwa inogona kunyora zvinhu zvose  Bata Ikozvino
6090 UV Printer neChina XP600 printer Musoro  Bata Ikozvino
XP600 Epson A3 UV Imashandiro Emapuranga Emagetsi  Bata Ikozvino
Kunze kwema DIY Epson UV Printer A3  Bata Ikozvino
A3 Vhidhiyo yeA UV inotengeswa  Bata Ikozvino
A3 UV Printer Alibaba Kushanda Kwekambani  Bata Ikozvino
A4 uv Flatbed Printer  Bata Ikozvino
A3 flatbed uv golf ball printer  Bata Ikozvino
edible cake printer ink  Bata Ikozvino
Refinecolor edible shona coffee  Bata Ikozvino
Refinecolor edible photo printer  Bata Ikozvino
coffee cookies cake printers and ink edible  Bata Ikozvino
Nhamba yakanakisisa yakadhindwa Chocolate Food  Bata Ikozvino
chocolate cake photo printing  Bata Ikozvino
kofi yega yega inodyiwa ishoko rekushongedza printer  Bata Ikozvino
choke chinodyiwa choki 3d printer  Bata Ikozvino
Refinecolor Technology coffee edible ink printer  Bata Ikozvino
Itafura yeVV yakafuridzirwa inogona kunyora zvinhu zvose
Unit Price: USD 3200 - 4500 / Set/Sets
Packaging: Wood box carton: 770mm * 720mm * 600mm / 98 * 83 * 78cm
Ndingada kuziva Wechat yako / WhatsApp kana Skype? Ndinoda kutumira chinyorwa chinyorwa uye sampuli kwauri .. Itafura yeVS Flat Machine inotora ma-computer-system control system. Mushonga wacho unobatana nekombiyuta neEthernet cable. Chero bedzi mapikicha emifananidzo (mapikicha) akaiswa mukombiyuta, inogona kudhinda...
Unit Price: USD 2580 - 6080 / Set/Sets
Kurumidza Kukurumidza DTG Inkjet T shirt Printer Product Description RF4260 inogadzirwa zvepamusoro-soro DTG Printer mumusika, sarudzo yeM Max.printing ndeye 1440 * 1440dpi neHigh quality printing; Inogona kudhinda makotoni tshirts, masokisi, tirasi, underware, cavas bags. Ruvara rwakakwana (CMYK + 4W) kudhinda...
6090 UV Printer neChina XP600 printer Musoro
Unit Price: USD 6699 - 7500 / Set/Sets
Packaging: Wood box carton: 850mm * 730mm * 610mm
Upgrade Automatic Phone case UV printer A1 + usayizi 6090 Digital UV flatbed printer ane 2 musoro weEpson XP600 6090 UV printer A1 Kubatsirwa: Hapana kupora mutsara wechiremara shandura chena uye maruva panguva imwe chete Kunyora kuderera urefu ndeye 5mm (2.5 nguva yemamwe mishonga) Mutengo wekukura: 60 * 90cm Rimwe...
XP600 Epson A3 UV Imashandiro Emapuranga Emagetsi
Chigadzirwa: XP600 Epson A3 UV Pushanduri Yemagetsi Yakawanda Mazuva ano, vanhu vanowedzera kutsvaka unhu, vanoda kupfekedza zvakatipoteredza maererano nezvavanofarira. A3 UV Inkjet Printer yakagadzirwa uye inogutsa zvido izvi, mishonga yedu inogona kuita kuti humwe humwe humwe hunoitika huve hunozadzika pasina...
Kunze kwema DIY Epson UV Printer A3
Our Epson UV Printer A3 inogona kushandiswa pakushongedza, kushambadzira, kuratidzwa uye kutanga bhizinesi. Chinhu chinonyanya kukosha Epson A3 UV Chipinda Chekushanda , Vhidhiyo yeVV ndiye mutengi wedu, isu tiri mugadziri we refinecolor. A3 Vhidhiyo Yepabhesi Yemaodzanyemba yeVhidhiyo Mifananidzo yezvinhu 1). CE CE...
A3 Vhidhiyo yeA UV inotengeswa
Yedu A3 UV Printer Flatbed inotanga nzira itsva zvachose yekushongedza chero chinhu chipi nechipi kana chero nzvimbo dzakagadzikana. Panzvimbo yekushandisa shanduro yekunyora kushandiswa kana kupedzisira kudhindwa. Tichishandisa purogiramu yakagadzirwa software uye michina yekudhinda, tinogona kuumba yakakwirira tsika...
A3 UV Printer Alibaba Kushanda Kwekambani
Inyanzvi itsva yekuendesa kuA3 UV Printer Alibaba inounza mifananidzo kumasvingo ako mune zvose zvese. A3 UV LED Printer inounza mavara chaiwo kumufananidzo sezvazvakaitwa nemudzidzisi chero chinhu chipi nechipi, asi achishandisa unhu
Unit Price: USD 1400 - 1880 / Set/Sets
Packaging: Wood box carton: 680 mm × 580 mm × 450 mm ~ 0.18 cube
Tsanangudzo: Zviratidzo: 1) Inogona kushandisa uv ink (CMYK) + 2 inki yakachena 2) Nyaya idzi dzinosanganisira acrylic, crystal, chiko, plastiki, pfungwa, aluminiya, PVC, ABS, mabwe, ceramic tile, KT board, bhokisi remapuranga, foam board, CD, Fresh flower, chero nzvimbo yepamusoro inogona kudhinda, kunyange mukati me...
Unit Price: USD 3300 - 4300 / Set/Sets
Iyi Best Machine Printing Machine inogona kudhindwa nemigumisiro yakanakisisa pahombodo, inogona kudhinda mapepa, zvakare. Zviri nyore kuchengetedza Digital Shoes Printer Printing Equipment, Kuchengetedza kusarudza kwezvikamu zvose uye zvakagadziriswa modular design ndiyo nheyo dzekusimbisa humwe hwakasimba hwakasimba...
Unit Price: USD 3300 - 3500 / Set/Sets
A3 flatbed uv golf ball printer ndiyo yedu itsva inoshandiswa mufekitari yedu. A3 Golf Ball Printer yakavakwa nehuwandu hwekusimudzira seyaku aluminium profile, inoita kuti mvura ishandise kupisa, 75W zvinongotora kuti UV Curing system ... 6 mavara uye max. 16 kupfuura kushandura chisarudzo. Inogona kudhindwa pamakona...
Zvinotora anenge gore rimwe chete kukudziridza iyi mishonga, isu tinotarisira kuita kuti zvive nyore kushanda uye muhupamhi hwepamusoro asi nemutengo unonzwisisika. Iyi Kudhindwa kweT-shirt paKumba , zvinoreva kuti unogona kutenga mumwe muchina kuti unyore kumba. T-shirt Zvinyorwa Zvishandiso uye Zvimwewo , isu...
Packaging: kunze kwebhokisi kerubhi
Kupa Mazano: 150 piece per week
edible cake printer ink mapepa ezvokudya emakeke anokwanisa kushandiswa kune imwe nzvimbo kusvika 11cm x 11cm uye kusvika 180 mm murefu. Iko inokubvumira kuti ugadzire zviratidzo zvinoshamisa zvinodyiwa kana mapikicha zvakananga pamusoro pemaoko pakarepo pasina chidiro chekupikisa pepa pepaiti zvachose. Chromacake...
Refinecolor edible shona coffee
Refinecolor edible shona coffee Musoro we HP unoshandisa Thermal Ink jet Technology, iyo iyo inowanikwa mumusoro inopfuura 300 digrii centigrade jets. Saka kana printer inosvika, shandisa inkinikiti yowino, uye dzorera pikicha. Mushure mokunge zvinhu zvose zvakanaka, uye gadzai inkino mu cartridge inin, uye iwe...
Musoro we HP unoshandisa Thermal Ink jet Technology, iyo iyo inowanikwa mumusoro inopfuura 300 digrii centigrade jets. Saka kana printer inosvika, shandisa inkinikiti yowino, uye dzorera pikicha. Mushure mokunge zvinhu zvose zvakanaka, uye gadzai inkino mu cartridge inin, uye iwe unogona kudhinda. Kana iwe usina...
coffee cookies cake printers and ink edible
Iyi 3d chokoti printer inotengeswa inogona kudhinda coffee, keki, cookies, chokoti, mabhisikiti, pombi, dessert sezvaunoda, printer ichauya ne software, cartridge, accessories parts, manual, CD inotenderera, nezvimwe. Method of Filling Ink Inogona kujowa zvakananga mumushumo wakaoma 15ML, 5ML imwe yemavara. Mushure...
Nhamba yakanakisisa yakadhindwa Chocolate Food
Ichi chikafu Chinyorwa chinogona kunyora kofi, keke, cookies, chokoti, mabhisikiti, pipi, dessert sezvaunoda, printer ichauya ne software, cartridge, ccessories parts, manual, CD dzinotungamirira, etc. Nzira yekuzadza Ink Inogona kujowa zvakananga mumushumo wakaoma 15ML, 5ML imwe yemavara. Mushure mokunge mujoka uine...
chocolate cake photo printing
Unit Price: USD 3300 / Piece/Pieces
Ripples inoshandiswa nhamba inokura yekambani dziri pasi pose kugovera vateereri vavo, kukurudzira chizivo chekuziva nekuwedzera kuvimbika. Chakavanzika chekubudirira kwedu chakareruka: tinokubatsira iwe kugadzira ruzivo runonakidza rwekunwa runoswededza vatengi uye unovachengetedza kuti vadzoke kune zvimwe. Ichava...
kofi yega yega inodyiwa ishoko rekushongedza printer
Ichava nehukuru hunotaridzika maitiro asati agonha zvokudya zvinonaka kuti uchengete nguva yakanaka uye inofadza. Mufananidzo wacho unogona kutora 100% pamusoro pezvokudya. Inyanzvi yemagetsi yakapiwa zvikafu zvechikafu zvakanakisisa zvinonaka uye zvinoreva, rega hupenyu hwako huve huri huri huri hunovaraidza. Tinoda...
choke chinodyiwa choki 3d printer
Unit Price: USD 3200 / Piece/Pieces
Shanduro ichagadzirisa nzira iyo zvinodhaka & zvinodyiwa zvezvokudya zvinobudiswa uye zvinonakidzwa. Nzira yekuendesa mberi kuburikidza nekudhinda musoro musoro kunofamba kuti urege kudya zvokudya uye zvakare kudzivisa kudya hakugoni kuiswa pachikuva ichienzaniswa pamwe nehutachiona hwehutachiona kuburikidza...
T Shirt Printing Machine OEM , tinogona kugamuchira OEM yako. Automatic lift platform, kushanda zvakanaka, kuderedza iko kukanganisa kukanganisa, iyo inonzi digital Inkjet Multifunctional Inkjet Custom T Shirt Printing Services Dtg printer inogona kudhindwa panguo seTe shirt, hoodies nemuchena wakajeka uye...
Itafura yeVV yakafuridzirwa T shirt Printer Food Printer Coffee Printer Printer Cake A3 UV Printer Itafura yeAV yakagadzirwa Itafura yeVV yakawanda DIY